Analanjirofo sy Sava : ho betsaka ny rotsak’orana | NewsMada
Analanjirofo sy Sava : ho betsaka ny rotsak’orana
Par Webmaster Two sur 18/01/2016
Mbola nahazo filazana fampitandremana amin’ny habetsahan’ny rotsak’orana amin’ity fiandohan’ny herinandro ity ny faritra Analanjirofo sy Sava. « Mila mitandrina, noho izany ny mponina eny amin’ny faritra iva manakaiky ny renirano samihafa amin’ny fiakaran’izy ireny tampoka », hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Mety hahatratra hatramin’ny 50 mm mandritra ny 24 ora ny refin’ny rotsak’orana ho an’ny ilany avaratra andrefana sy avaratra ny Nosy. Manjaka ny zone de convergence inter tropicale (ZCIT) amin’ny ilany andrefana iray manontolo.
Momba ny toetry ny andro anio, handrivotra ny any Atsimo Andrefana. Handrahona vitsy ny faritra Atsimo Andrefana, Matsiatra Ambony sy Ihorombe, Androy sy Anosy ary Atsimo Atsinanana. Hanorana arahin-kotroka hialohavana tafiotra indraindray ny faritra sisa mandritra ny tapak’andro hariva.
Na teo aza ny fampitandremana amin’ny ora-mikija voalazan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny asabotsy teo, tsy misy loza manambana eto amin’ny lemak’Antananarivo.
Nidina Ikopa eo Anosizato tao anatin’ny 24 ora fa hiakatra kosa ho an’ny 12 ora manaraka. Nidina koa izy eo Bevomanga nefa hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. Nidina i Sisaony eo Ampitatafika nefa hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. Nidina Imamba eny Ambohidroa. Ny tsy misy ny filazana loza ho an’ny fandehan’ny rano, mitaraina hatrany ny mponina amin’ny faritra iva, Anosipatrana Atsinanana, Manarintsoa fa tonga ao an-trano ny rano maloto.